Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitra ny Angovo: “Mpandainga sy mpanakorontana ny sendikan’i Jirama”
Minisitra ny Angovo: “Mpandainga sy mpanakorontana ny sendikan’i Jirama”
Tamin’ny alatsinainy faha 27 novambra 2017 lasa teo, dia nihaona tamin’ny mpanao gazety ny minisitra ny Angovo sy ny rano Lantoniaina Rasoloelison sy ny tale jeneralin’ny Jirama Olivier Aimé Jaomiary tao amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Carlton Anosy raha nanokatra ny atrikasa momba ny angovo azo havaozina izay atao any ambanivohitra.
Tamin’izay fotoana izay koa no nanontaniana tamin’izy roalahy ireto ny mahakasika ny fanambaran’ny mpiasan’ny JIRAMA izay mivondrona ao amin’ny sendika dimy misy amin’ity orinasa ity. Efa ho volana maromaro izao dia nanao fitakiana mahakasika teboka dimy ny vondrona sendika ireto, ka tamin’ny faran’ny herinandro teo dia mbola nanamafy ny fitakiany hatrany izy ireo. Isan’ny takian’izy ireo amin’izany ny fampiharana ireo teboka dimy tsy misy hatakandro. Isan’ny olana lehibe koa ny voalazan’izy ireo fa manao didy jadona sy didi-ko fe lehibe ny tale jeneralin’ny Jirama Olivier Aimé Joamiary. Mandroaka mpiasa 50 tsy amin’antony ary mieritreritra ny hivarotra ny Jirama amin’ny mpandraharaha sivily.
Raha nanontaniana izany ingahy minisitra Lantoniaina Rasoloelison miadidy ny angovo sy ny rano dia nilaza fa mpandainga sy mpanakorontana ireo mpiasa ao amin’ny sendika ireo. Lainga avokoa no lazain’izy ireo amin’ny Malagasy, hoy izy. Tsy hisy ny fivarotana ny Jirama amin’ny olona sivily izany ary mijanona ho fananam-panjakana hatrany ity orinasa ity. Efa nisy ny fifanarahana nifanaovan’ny mpiasa sy ny mpampiasa ary nisy ny vahaolana efa noraisina amin’ny mety ho tombotsoan’ ny mpiasa sy ny orinasa. Nanambara teo amin’ny mpanao gazety koa ingahy minisitra fa olona 48 no noroahina ny taona 2016 fa tsy tamin’ny andron’ingahy Jaomiary, noho ny fahadisoana aran-kasa nataon’izy ireo. Mbola tafiditra amin’ny fandiovana ny orinasa koa izany. Nambaran’ingahy minisitra aza fa ny mpitarika sendikaly ingahy Thierry Rakotobe izay voaroaka tamin’io fotoana io dia niaiky ny hadisoany ka efa manao ny hanatsarana ity orinasa ity na any ivelany izy satria nahatsapa tena.Tsy mbola mety nefa ireto mpiasan’ny Jirama ireto ka izao nilaza fa izay iray miala na ny tale jeneraly na ny mpitarika sendikaly.
Raha nanontaniana indray ingahy tale jeneralin’ny Jirama Olivier Aimé Jaomiary dia nilaza fa ny zavatra tsy azo ekena amin’ny hahafaty ny orinasa dia tsy azo ekena. Olona telo no noroahiny noho ny fahadisoana tsy azo ekena intsony. Misy ny efa nilamina koa nefa na izany aza. Misy fatiantoka mahatratra 200 tapitrisa ariary isam-bolana ny Jirama amin’izao fotoana izao noho ny jiro omena fotsiny ny mpiasa, hoy hatrany ny fanazavana.
Maro ny zavatra tsy mazava amin’ny fitantanana ny Jirama hatramin’izay ary mifamahofaho be ny raharaha.
Raha naheno ny tenin’ireo mpiasa taty ivelany izahay dia milaza fa tsy hihemotra mihitsy izy ireo fa ny hanongana ny Tale jeneraly hatrany no tanjona satria tsy mahay mitondra orinasa hono ity olona ity. Dia ho hitantsika ny tohin’ny raharaha.